Thwebula 360 Total Security Essential 8.8.0.1119 – Windows – Vessoft
WindowsUkuphephaAntivirus360 Total Security Essential
Ikhasi elisemthethweni: 360 Total Security Essential
I-Wikipedia: 360 Total Security Essential
Ukuvikeleka Okuphelele Kwezingu-360 – i-antivirus yokuvikela okuyisisekelo kwekhompiyutha ngokumelene nezinsongo ze-malware nezintambo. Isofthiwe isebenzisa izinjini eziningi ze-antivirus kanye nobuchwepheshe befu obuhlakaniphile ukuthola amafayela anegciwane nezinsongo ezingaziwa noma ezifihliwe. I-360 Yonke Yokuvikeleka Okuyisisekelo isekela izinhlobo ezahlukene zesistimu zesistimu zamafayela asolisayo, okungahlolwa kabanzi ukuze ugweme izinkinga zokuphepha. Isofthiwe inikeza ukuvikelwa kwi-intanethi ngokuvimbela amawebhusayithi awingozi nokwenza ukuthenga okuphephile ku-intanethi. I-360 Yonke Yokuvikeleka Okuyisisekelo inebhokisi le-sandbox elikuvumela ukuba uvule amafayela noma usebenzise izinhlelo zokusebenza endaweni engasodwa ngaphandle kokufaka ingozi yokulimaza uhlelo oluyinhloko. I-antivirus iphinde isebenzise ukuhlaziywa kokuziphatha ukuvimbela ukutheleleka kwesistimu nokuvikela idatha yomuntu siqu ngokumelene ne-ransomware.
Ama-antivirus angeziwe engeziwe
Ukuvikelwa kwesistimu yefayela kanye nokubhalisa
Thwebula 360 Total Security Essential
I-360 Total Security – i-antivirus ephelele neqoqo lamathuluzi angeziwe wokuphepha ukwenza ngcono ukusebenza kwekhompyutha kusuka kwinkampani Qihoo 360.
Amazwana ku 360 Total Security Essential
360 Total Security Essential software ehlobene
I-AVZ – into esetshenziswayo yokuvikela i-spyware kanye ne-adware. Isoftware iyakwazi ukubona izinhlobo ezahlukene zamasosha, izibungu kanye ne-backdoor.
I-Comodo Internet Security Premium – isoftware yama-antivirus ine-firewall eyakhelwe ngaphakathi nesethi yamathuluzi okuvikela ukuthola nokunciphisa amagciwane, i-malware kanye nezinsongo zenethiwekhi.
Ithuluzi ukugijima isofthiwe endaweni ecezile virtual. Isofthiwe evimbela wokusindisa idatha kwi umsebenzi izicelo running in yimuphi USB ulwazi.
I-Free password ye-PDF Remover – isofthiwe encane ukuvula amafayela we-PDF futhi uwagcine ngaphandle kwemikhawulo yasekuqaleni. Isoftware isekela ukucubungulwa kwe-batch kwamafayela.
IGreenshot – isoftware ehlangene yenza ama-skrini, axhase amafomethi wezithombe athandwayo futhi abe nomhleli wehluzo owakhelwe ngaphakathi.